भोलाद्धारा निर्देशित “दक्षिणकाली माई” म्युजिक भिडियो सार्वजनिक । | www.aagopati.com Websoft University
bignews भिडियो मनोरञ्जन समाचार
भोलाद्धारा निर्देशित “दक्षिणकाली माई” म्युजिक भिडियो सार्वजनिक ।
काठमाडौ । बुद्ध ब. खत्रीको लोक दोहारी गीतको म्युजिक भिडियो “दक्षिणकालीमा माई ” सार्वजनिक भएको छ । काठमाडौमा एक कार्यक्रमका विच उत्त गीतको म्युजिक भिडियो सार्वजनिक गरिएको हो । गीतमा विरु लामा ,अनिता खत्री ,बुद्ध खत्री ,मनिषा कोईराला को आवाजमा रहेको छ ।
गीतलाई भोला अधिकारीले शब्द लेखेका हुन भने लय बुद्ध ब. खत्रीले गरेका छन् । उत्त भिडियोमा बर्षा कार्की ,देव तामाङ, प्रदिप खड्गी,भोला अधिकारीको अभिनय रहेको छ । गीतलाई काठमाडौ आसपासमा छायाँङकन गरिएको छ । गीतमा माया प्रेमका कुरा समेटिएको छ ।
आफ्नी प्रेमिकालाई आफुलाई जुराईदिन दक्षिणकाली माईसँग भाकल गरिएको कुरा छ । गीत धेरै पहिला रेकर्ड गरेको भए पनि म्युजिक भिडियो भर्खर छायाँङकन गरिएको गायक बुद्ध खत्रीले बताए । उत्त गीतलाई भोला अधिकारीले नै निर्देशन गरेका छन् भने सागर गौतमले छायाँङन गरेका छन् । गीतलाई पुर्वेली जुनतारा म्युजिक प्रा.ली.ले बजार व्यवस्थापन गरेको छ । https://www.youtube.com/watch?v=QJlfRjNLMfI
Labels: bignews भिडियो मनोरञ्जन समाचार